Indawo entle kunye neSunny 2BHK esembindini weMumbai
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGauri
Yiva ngendawo yokuhlala efudumeleyo & epholileyo kumbindi wesixeko saseMumbai kwigumbi elinomtsalane. Balekela kule ndawo yabucala enamagumbi okulala amabini anefanitshala epheleleyo (Ibhedi, iwadilophu, iTV kunye neA / C) enekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela eli-2.
Ngokhuseleko lwe-24x7, i-wifi yasimahla, inkonzo yemihla ngemihla, inkonzo yokuhlamba impahla, zonke iivenkile ezibalulekileyo ezijikeleze, ibekwe kumbindi we-Worli sea link (5mins), iTempile yaseSiddhivinayak (5mins), Lower Parel (13mins), BKC (13mins) .
Indawo elungileyo yeshishini, usapho okanye izibini ezihlala.
Likhaya elipholileyo elinazo zonke izinto eziyimfuneko. Coca ngamaxesha onke.
Le ndawo ikwindlela enkulu embindini wemarike ephithizelayo nayo yonke into ukusuka kwintlanzi entsha ukuya kwigrosari ukuya kwizinto zobucwebe, ii-ATM, ii-Spa kunye neevenkile zekofu. I-Pheonix Shopping mall yimizuzu eli-13 kude, iBandra-Worli Sea ilinki kunye ne-Worli yolwandle indlela entle yokuhamba iphakathi kwemizuzu emi-5 yomgama wokuhamba, iShivaji Park (iphuli yokuqubha iMahatma Gandhi, iBungalow kaSodolophu, iVeer Savarkar Smarak) ikumgama we-10 wemizuzu kwaye iTempile yaseSiddhivinayak ikuMgama weSiddhivinayak. i-7 min ukuhamba. Iikhabhi kunye neebhasi zothutho zasekuhlaleni zifumaneka lula. Qiniseka ukuba iya kuba yindawo yokuhlala ethe cwaka kungekho mntu uyakukhathaza kwaye imithwalo ukuba ukonwabele kwesi sixeko sikhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Gauri
Nangona ndingafumaneki imini yonke, iindwendwe zingafowuna ukuze zifake izicelo nangaliphi na ixesha losuku. Kuya kuba kuhle ukuba iindwendwe zinokuthumela izicelo ngaphambi kokuba zifike.